Samsung သည်၎င်း၏အစီအစဉ်များအားလုံးကို၎င်း၏ခေါက်ထားသည့်မိုဘိုင်းနှင့် "Infinity" ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည် Androidsis
ဤနှစ်နှစ်တာ Notch တွင် Samsung သည် Apple နှင့် Android ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံး၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပုံစံကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်သူကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်သူကိုယ်တိုင်မည်သို့ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည် နာရီအနည်းငယ်အကြာငါပြိုင်ပွဲအားလုံးမိုက်မဲဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သူတို့ရဲ့ "ထစ်။ " နှင့်အတူ
၎င်းသည်အချက်နှစ်ချက်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းကိုအပြည့်အဝပြောင်းလဲပေးသောခေါက်မိုဘိုင်းတစ်ခုနှင့် Galaxy S10 မျက်နှာပြင်၏ Infinity ဒီဇိုင်းကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောအလောင်းအစားနှစ်ခုဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များကိုယူခြင်းသည်ဘာလဲဆိုတာပြသသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခြားအတွေ့အကြုံများကိုယူဆောင်လာရန်။
တ ဦး တည်းရနိုင်သည့်အမှန်တရား အနည်းငယ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းနှင့်အတူတက်ကျွေးမွေးရန် ကုမ္ပဏီများသည်အခြားအတွေ့အကြုံများကိုစျေးကွက်သို့ယူဆောင်လာရန်သို့မဟုတ်စွန့်စားရန်။ Apple က "notch" ကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်မသိသောနေရာမှယူပြီး၎င်းကိုအခြားသူများကလိုက်နာကြသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိ၊ မရှိ၊ AI အသစ်နှင့်အခြားတစ်ခုဆိုလျှင်ဘာလုပ်မလဲ။ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါ ပြုသောအမှုတစ်ခုတည်းသောအရာသည်စျေးကွက်ကိုထွင်းဖောက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်နှင့်ပြည့်နှက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Samsung သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်လုံးဝဝေးကွာသွားစေရန်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ အတူလုပ်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုသွားခွင့်ပြုမယ့်ခေါက်မိုဘိုင်း အရွယ်အစား၏ ဖုန်းကနေတက်ဘလက်တစ်ခုဆီကိုကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့။ ထိုအပုံစံကိုသာဒါပါဘူး Rouyu ၏ခေါက်၏အဆိုပြုချက်ကိုအဖြစ်မပါလျှင် တစ်ခုက UI ကို၏ရောက်ရှိခြင်းကြေငြာခဲ့သည်သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်၏တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခုကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုမည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလွှာအသစ်။
၎င်းခေါက်ထားသည့်ဖန်သားပြင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းတွင်အခြား format တစ်ခုကိုယူဆောင်နိုင်ရုံသာမကတစ်ချိန်တည်းတွင် One UI၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအဆင်ပြေသော interface တစ်ခုရရှိစေသည်။ ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးသည် သေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့တစ်ခုအကြားပြောင်းနိုင်စွမ်းရန်။
ဒါ့အပြင် Samsung ဟာလူတိုင်းကို Apple နဲ့အတူလိုက်နာမယ်ဆိုတာကို Samsung ကစိုးရိမ်နေပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယခုစျေးကွက်မှာမည်သူမျှမကယ်တင်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားများစွာသော Huawei၊ Xiaomi နှင့် LG တို့မရှိ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထစ်၏မီးလောင်ရာသွားပြီပါတယ် သူကနောက်ဆုံးကောက်ရိုးထားပြီးသောငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်မှထွက်ခွာရန် Google က၎င်း၏ Pixel3XL ကိုအတူ.
လ၏အမှု၌ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ဈေးကွက်ကနေထွက်သွားပြီမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်တီထွင်မှုကိုပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့် Samsung သည်ခေါက်ထားသည့်ဖုန်းနှင့်အရာအားလုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်အပြင်ရှေ့ဘောင်တစ်ခုလုံး၏မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့် "New Infinity" မျက်နှာပြင်ပါသည့် Galaxy S10 ကဘာလဲ။ ငါတို့ပြောပြီးပြီ ရှားပါးအခါသမယအပေါ် ဘယ်လိုကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ် ကင်မရာကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ် y မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ.
၎င်းသည်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တက်ဘလက်တစ်ခုအတွင်းသို့ထွက်ပေါ်လာသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်! # SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn
- Samsung DEVELOPERS (@samsung_dev) နိုဝင်ဘာလ 7, 2018
တနည်းအားဖြင့် Samsung ကလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ထစ်ရဲ့ပျင်းစရာကနေအနာဂတ်ကိုသွားကြပါစို့။ ပြီးသားကြောင်း« New Infinity »မျက်နှာပြင်နှင့်ထိုခေါက်မိုဘိုင်းနှင့်အတူငါတို့လက်၌ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သူတို့၏လက်၌အလွန်ပူပြင်းသည့်အာလူးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်း၊ နောက်နှစ်အတွက်သင်တန်းကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုသူတို့မသိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်ရေနံစိမ်းကိုမြင်တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ မည်သူဖြစ်နိုင်သည်။ Samsung သည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းကိုတင်ဆက်ရန်သတ္တိနှင့်သတ္တိရှိသလား။
ဆမ်ဆောင်းရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအဆိုပြုချက်တောင်မှငါတို့တွေ့ခဲ့တာနဲ့တော်တော်ကွာခြားပါတယ်။ သူကတစ်လှည့်ကွက်အတွက်လုပ်ကြနိုင် သူများသည်ဖန်သားပြင် Infinity-V, Infinity-U နှင့် Infinity-O ။
Samsung ကမိုဘိုင်းဈေးကွက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ နောက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လူအများစုကသူတို့နည်းပညာတွေ ၀ ယ်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကနောက်လာမယ့်နှစ်မှာကျန်တဲ့သူတွေကသူတို့လောင်းကစားနဲ့စလိုက်တဲ့အခါပျော်ရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ဆမ်ဆောင်းသည်ပြိုင်ဘက်အားလုံးကိုအရူးလုပ်ခြင်း